Fanantenana Hisian’ny Frantsa Miray Rehefa Nandalo Fankahalàna Sy Tahotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2015 8:39 GMT
Vakio amin'ny teny Català, Español, русский, Français, English
Telo herinandro taorian'ireo andianà fanafihana voarindra nahafatesana olona 130, mba manao ahoana i Parisy amin'izao fotoana izao? Nanamafy tokoa ny fiarovana ny renivohitra ireo manampahefana ary nanomboka ny famoretana ireo ahiahiana ho mety mbola miketrika herisetra misimisy kokoa amin'ny anaran'ilay vondrona milisy mahery fihetsika ISIS (fantatra koa amin'ny hoe Daesh), izay nilaza ho tomponantoka tamin'ilay fandatsahan-drà. Tena niova tanteraka mihitsy ny rivotra iainana tao amin'ilay tanànan'ny hazavàna, saingy ezahan'ireo olompirenena ao ny hiala amin'ireo fanafihana lasa ireo ary hizotra hiaina amin'ny fiainany andavanandro.
Ao anatin'ny tahotra, mety hisy vovoka fanantenana hisian'ny Frantsa miray bebe kokoa ve?
Fa na eo kosa aza ireny fiantraikany ratsy ireny, misy ihany koa ny fahafahan'i Frantsa miray bebe kokoa. Marobe ireo tenifototra nironana taorian'ireo vono olona; iray tamin'ireny aza ny #Nousommesunis (Mitambatra isika) izay nanana ny tranonkalany manokana sy pejy Facebook. Nahasarika kokoa ny saina izy io, miohatra amin'ilay tenifototra #terrorisme (fampihorohoroana) izay maneho fa mitodika kokoa amin'ny fiaraha-mijoro ny fifantohan'ireo olompirenena ao Parisy. Olona iray mpampiasa Twitter nanamarika hoe: